सपनासँग कमलको रोमान्स (भिडियो सहित) - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
सपनासँग कमलको रोमान्स (भिडियो सहित)
वैशाख १८, काठमाडौं । पछिल्लो समय निकै ब्यस्त हुँदै आएका मोडल कमल बुढाथोकी सपना पन्तसँग रोमान्स गर्न भ्याएका छन् । केही महिला मोडलहरुसँग रोमान्स गरिसकेका कमल पछिल्लो समय सपनासँग पनि रोमान्स गर्न भ्याएका हुन् । ‘पोखरेली कान्छीले’ भन्दै उनी रोमान्समा उत्रीएका थिए ।
रोमान्समा उनले के गरे ?, कसो गरे ?, के भने ? यी सब उनलाई नै थाहा होला । यहाँ कुरा अलि फरक रहेको छ । कुरा हो एक म्युजिक भिडियोको । कमल परेली फिल्मस् प्रालिको प्रस्तुतीमा रहेको ‘पोखरेली कान्छीले’ बोलको गीतमा सपनासँग रोमान्स गरेका हुन् ।
‘पोखरेली कान्छीले’मा रिदम राईको शब्द तथा सुमधुर संगीत रहेको छ । जसलाई राई स्वयंमले स्वर दिएका छन् । गीतको म्युजिक भिडियोलाई परेली फिल्मस् प्रालिकै निर्माणमा निर्देशक मिलन कार्कीले निर्देशन गरेका छन् ।
जसमा कमल बुढडाथोकी र सपना पन्तको अभिनय तथा रोमान्स रहेको छ । गीतलाई सन्तोष ढकालले खिचेका हुन् भने, निर्देशक कार्कीले नै सम्पादन गरेका हुन् । गीतको भिडियो निकै नै राम्रो बनेको र एक पटक हेरिसकेपछि पुनः हेरौँ, हेरैँ लाग्ने बनेको निर्देशक कार्कीले बताए ।